Martech Zone - Ubuchwepheshe Bezokumaketha
NgoLwesithathu, Agasti 24, 2005 NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Kule mpelasonto edlule, ngibe nohambo oluhle lwebhizinisi / lomuntu siqu ngaya eVictoria naseVancouver, eBritish Columbia. Ngithweswe iziqu e-High School eVancouver eminyakeni engama-20 eyedlule futhi sengibuyele kabili kuphela. Ungumuzi omangalisayo - ohlanzekile, omuhle, wanamuhla futhi unempilo. Ngichithe isikhathi esithile nomngane wami omkhulu wesikole samabanga aphezulu futhi sathola nezimbobo eziyi-9 zegalufu. Bekuyimpelasonto enhle kakhulu! (Futhi ibhizinisi lahamba kahle, futhi!) Ngabona
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Kudala ngifuna ukulandela okuthunyelwe kwami ​​kwe-Open = Growth. Okuchazwe kulokho okuthunyelwe amathuba okuphumelela lapho abantu begxila ekutheni izixazululo zabo zingahlanganiswa kanjani nezinye izixazululo. Kukhona i-flip side kulokhu, futhi lokho kwenzelwa izinkampani ukukhawulela ukusebenza kwezixazululo zazo kungqikithi yokuthi zisetshenziswa kanjani. Ukungeza inqwaba yemikhiqizo, izinsizakalo, nezici kungaba yingozi. Abahleli bezinhlelo bayayibiza
NgoLwesine, July 28, 2005 NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Kwakunabantu ezweni lonke abaphefumula ngokubona iShuttle Discovery yethulwa ngempumelelo. Kukhona labo abakholelwa ukuthi izigidigidi zamaRandi ezichithwe ohlelweni lwasemkhathini kuwukuchitha nje okukhulu kwemali. Angikwazanga ukungavumelani ngaphezulu. Njengalokhu kwethulwa kwakamuva, ukubeka imigomo okungenakwenzeka ukuyifinyelela yikhona okusishukumisela emisha nasekuqhubekeni. Uhlelo lwesikhala lungenye yalezi zinhlelo
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Ngasekuqaleni konyaka, ngisebenze neThimba likazwelonke leNFL ukuhlola amathuluzi abo wokumaketha e-database nase-imeyili. Kube wukuhlaziywa okuphelele kwamathuluzi amaningi abanawo. Izindawo engigxile kuzo kakhulu yilezi: Amandla okuhlanganisa izixazululo zangaphandle Amandla okwenza izinqubo kube lula Ukusetshenziswa kokuphendula kwenkampani ngokusebenzisa ukuphathwa kwe-akhawunti kanye nokwesekwa Izimbili zokuqala zalezi ziyinzuzo zangomuso. Bengifuna ukuqinisekisa ukuthi inhlangano
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Ukulalela umsakazo lapho ngiya emsebenzini kuyisikhathi esinokuthula kimi. Kungakhathaleki ukuthi kunesiminyaminya esingakanani, ngingumuntu othokozela ikhempu. Ukuhamba kancane kwethrafikhi? Akunankinga… o-DJ bami bazongidonsela ngaphakathi bese beqala usuku lokuphumula kahle…. Kuze kube izolo…. Angikwazi ukuyeka ukucabanga ngakho. Ngilalele isikhangiso esihle emsakazweni ngomfana ongathandi ukunambitheka kwekhofi. Enye indlela - i-Mountain Dew. Umbethe Wentaba? Umbethe waseNtabeni!
Okudlule 1 ... 1,025 1,026
Ikhasinkomba 1026 of 1026